Inkcazo eveze ebomini bethu izinto ezininzi ezonwabileyo, kwaye cishe wonke umntu, ingakumbi abantu abatsha baya kutshata, banefilimu ethanda kakhulu ofuna ukuyihlaziya ngezikhathi ezithile, amabinzana asetyenziswa ngokuzonwabisa kwimpilo yemihla ngemihla, into esondeleyo okanye ivuyisa. Ngoko kutheni ungasebenzisa ifilimu yakho oyintandokazi njengomthombo wokuphefumlela ukulungiselela umtshato ongenakulibaleka? Umtshato we-Kino uyintlukwano yosuku olubalulekileyo ebomini babantu abathandekayo ababini, okuba ngumcimbi obalaseleyo kwaye oyingqayizivele.
Isimo somtshato we-cinematic
Ukuqala, ngokuqinisekileyo, kufuneka wenze isigqibo kwifilimu, eya kuba sisiseko somtshato. Ingaba ngumdlalo wobudala waseSoviet, i-movie yesenzo esithandanayo okanye isandi somculo. Kodwa nangona kunjalo, kufuneka kubekho indaba enothando, apho umtshakazi nomyeni baya kuthandana namaqhawe.
Ngokubhekiselele ekuphuhlisweni kweskripthi, unokuzibhalela ngokwakho okanye ufundise iingcali ezisebenza kwi-arhente yomtshato. Ngexesha elifanayo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba le nkqubo inokuba yinto esetyenziswa ngokugqithisela abasebenzi kwaye idinga ingqondo engavamile.
Ukuphuhlisa iskripthi somtshato, ngokuqinisekileyo, kufuneka uhambelane nomgca wendaba. Nangona kunjalo, akuyi kubakho ukugcina icebo lefilimu kwifomu yalo yangaphambili, kwaye, ngokubanzi, oku kungenzi nto. Kodwa ukuba uvelise ngokuqinisekileyo iimeko eziphambili ze-cinema zisabalulekile, unakho ukuhleka ukubetha izicwangciso ezininzi. Zifanele zihambelane kwaye zifakwe ngokwemvelo kuzo zonke izigaba zomcimbi womtshato. Makube yintlawulelo, uhambo olujikeleze isixeko, iseshoni yesithombe kunye nesidlo semikhosi.
Izimemo zomtshato kufuneka zibe yinto ehlotshisiwe yokuqala ngokuxhomekeke kwifilimu ekhethiweyo, iqule nayiphi na impawu okanye imifanekiso ekhumbuzayo. Kwiimemo, umhenwa kufuneka acetyiswe ukuba umtshato awuqhelekanga kwaye kuyimfuneko ukubonakala kuyo kwindandatho yomdlali ovela kwi-movie. Unako ukunika iindwendwe ezithile iindidi ezithile kunye nesicelo sokufunda kubo umbhalo oya kubakho ukubiza, ukuthatha inxaxheba "kwindawo" ethile yomtshato. Iindwendwe ezithakazelisayo ziza kunika impendulo entle kweso sicelo, kuba, ngokwenene, uvakalelwa njengomdlali weqela eliza kufuna wonke umntu.
Ngokufanelekileyo, kuya kuba nomqondiso wemoto enombala ofanelekileyo njengesithuthi somtshato. Yaye ukuba itheyori yisekelwe kwimeko yomtshato, ke amahashe amathathu amahle kunye nokuthutha aphelele.
Izambatho zabasandul 'ukutshata kufuneka okungenani zihambelane neendleko zabalinganiswa abaphambili okanye abazisebenzisayo. Kwimeko nayiphi na into, kufuneka baqaphele kwaye babangele imibutho phakathi kwabo bakhoyo ngefilimu ekhethiweyo.
Iindwendwe nazo zifuna ukukhetha ngokufanelekileyo iingubo zabo, ukuze zingabonakali njenge-eccentrics ehlekisayo. Ukuba awukwazi ukufumana iimpahla kwi-wardrobe ekhoyo, kufuneka udonse i-suit ukuze ulandele. Oku kuya kuba yindlela yokuphumelela kunene.
Njengenkqubo yokuzonwabisa yeendwendwe, unokuluququzela umncintiswano kwisigqibo esihle somlingisi uze unike umphumeleli umvuzo ongakhohlwayo. Ngokuxhomekeke kwisiqephu sefilimu, hlukanisa iindwendwe kwiinqela zamanqabileyo antle kwaye angabonakali kwaye uzilungiselele naziphi na iintambo.
Ukuqulunqwa komculo womtshato akungabazeki ukuba kubandakanya iziqulatho ezivela kwifilimu, ekhethiweyo njengesiseko script. Umncintiswano omkhulu womdaniso wefomati yomlilo oza kubakholisa iindwendwe.
Le nxalenye nje encinci yamathuba apho umxholo we-movie unikezela ukulungiselela umgubho womtshato. Ukuba ukhetha ifilimu uze uphakamise imfesane xa ubhala iskripthi, usuku lomtshato luya kuba lulo suku oluqaqambileyo nolumnandi lobomi bomntu ozayo.
Umtshato otshatyalaliswayo: umtshato womtshato
Umtshato kwi-Hollywood style
Iimpawu zokukhulelwa: kwiminyaka yokuqala
Iidlophu zesitya esivela kwi-cottage cheese okanye nge-cottage cheese
I-cosmetology ye-Hardware kwi-salon yobuhle
Indlela yokupheka inkukhu ekhangayo yenkukhu
Izibonakaliso zezifo zentsholongwane kubantwana
Kuthetha ukuthini ukulala ngesondo?
Isaladi "Rustic" ngesiFrentshi
I-Forshmack ukusuka kwinquma